Mareegta Jacfar Maxamed Cali – Dhaqan, dhur, dhugasho, dhigid iyo dhihid
Mareegta Jacfar Maxamed Cali
Dhaqan, dhur, dhugasho, dhigid iyo dhihid
Ogaaw 1400 sano ka hor ayuu adiga ku jeclaa. Ma aadan dhalan hadana wuu kuu ooyay.
November 9, 2019 Jacfar Maxamed
Magaciisi ayaa loo gefay. Fariintiisi ayaa lagu jees-jeesay. Waxaa la isku dayay in la sixro, in la sumeeyo. Waa la dhagxiyay. Calooshiisi waay la kulantay gaajo daran. Qoyskiisi ayaa la laayay. Nafsadiisi ayaa loo hanjabay. Adeerkii waxaa lagu dilay Waran. Qaraabadiisi soke waxay u dabaaldegeen dhimashada wiilkiisi yaraa uu jeclaa.
Hadana wuu cafiyay dhamaan, godob iyo aano uma qaadin, ma sameyn wax aargoosi ah. Wuxuu ku wajahay Duni neceyb ka buuxo dhoolacadeyn, naxariis iyo Jaceyl.
1400 sano ka hor ayuu ku jeclaa. Ma aadan dhalan hadana wuu kuu ooyay, Alle ayuu kuu weydiiyay inuu ku cafiyo. Wuxuu kula rabay Janno. Wuxuu lahaa Xaasas, Caruur, Asxaab aad u jeclaa laakiin wuxuu ahaa magacaaga iyo guud ahaan dadkiisa wixi uu ku celceliyay “Yaa Ummati, Yaa Ummati”
Waa Xabiibkeena Nabi Muxammad Sallalaahu Calayhi Wasalam. Ma jiro qof la mid ah. Alle ayaa dad oo dhan ka doortay. Waa Khayru Khalqillaah. Waxaan ka jecelnahay Nafteena. Waxaa waajib nagu ah in aan difaacno. Waxaa Waajib nagu ah in aan ku Sallino mar kasta aan Magaciisa maqalno.
Sallalaahu Calayhi Wasallam – صلى الله عليه وسلم
Ku dhawad Soddon sano ayay ku qaadatay. Akhri.
100-kii qof ee dinida ugu samaynta badnaa.
Michael Hart waxaa uu 28 sano qorayey buuggiisa lagu magacaabo العظماء المائة kaasoo uu kusoo qaatay 100 kii qof ee ugu saamaynta badnaa ee dunida soo maray.
Hadalladii uu ka jeediyey bandhigga buuggisa oo lagu qabtay magaalada London waxaa kamid ahaa hadaladiisa
“Nin baa wuxuu dhex istaagay magaalo yarroo Makka la yidhaahdo wuxuuna yiri,” waxaan ahay nabi ILAAHAY baana isoo direy waxaa la iisoo direy inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan.”
waxaa rumeeyey 4 qof islaantiisa,saaxiibkiis iyo laba ilmood.
Hadda waxaa laga jooga soo bixitaanka nabigaasi NNKH wax kabadan 1400 sano tirada muslimiintana waxa ay gaartay wax ku dhow laba bilyan maalin kastana tiradiisa waa ay sii siyaadaysaa macquul ma ahan in nabigaasi uu been sheegayey, mana suura galayso in beenni ay noolaato 1400 oo sano mana jiro qof qaldi kara laba bilyan oo qof.
Intaa waxaa dheer, iyadoo laga joogo dhimashada nabigaasi muddadaa sidaa u badan ayaa haddana waxaa dunida laga helayaa malaayiin muslimiin ah oo diyaar u ah inay naftooda u huraan difaacidda nabigaasi iyagoo aan waligood arag.
Majiro qof masiixi ah oo naftiisa u huraya nabigiisa ama xitaa rabbigiisa.
Maxammed waa qofkii ugu cuslaa ee dunidan soo maray”.
Xigasho:Ibraahim Maxamed Aadan
Waa qeyb ka mid ah Qabyadii uu ka tegay Xasan Sheikh.
November 5, 2019 Jacfar Maxamed
Markii Muranka badda yimid go’aan cad oo aan mugdi ku jirin ayuu ka qaatay oo waa kii dacwadda geeyay Maxakamdda Cadaaladda adunka ee ICJ, oo Kenya waagu ku baryay.
September 2016: Muddo ka dib waa kii Wasiirka Gaadiidka iyo duulista hawada “Mudane Cali Axmed Jaamac Jingali” shegay in Jaadkii ka iman jiray Kenya la joojiyay arinkas oo Madaxwayne Xasan talo kulahaa. Waxaa intaa xigay in isla bishaa tobn-kedii lagu ballansana in “Uhuru Kenyata Madaxwaynaha Dalka Kenya uu ka so qeyb galo Shirkii IGAAD ee lagu madlsana in uu Xamar ka qabsoomo. dad badan ayaa aaminsanaa aragtida ah “in joojinta qaadka awgeed ay adkan doonto in Kenya Shirka soo xaadirto, balse UHURU KENYATA wuu aqbalay hadana waa tii isla Wasiirki Jaadka joojiyay loo diray ee uu dhabbaha diyaaradaha Aaden Cadde kuu soo dhaweeyay.
Wasiirkii Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ee xiligaa waxa uu shirkii jaraa’id ee hakinta qaadka ka yiri” Sidoo kale go’aankaan waxa uu wada saameyn doonaa dhammaan Hawada Soomaaliya, tallaabo adag ayana laga qaadi doonaa ciddii ku soo xadgudubta hawada Dalka. (Kenya ficil ma sameyn ee ayada loo garaabay oo go’ankii laga khafiifiyay.) ma aqan Maanta halka ay awoodda ka keentay Kenya oo shalay sidaa ahayd.
EX-Madaxweyne Xasan Sheikh haba lagu dhaliilo hogaankisii afarta sano oo aysan dad badani la dhacsaneyn, Haddana wuu ka burji adkaa Kenya, sida Hadda Xukuumadda talada heysa ay Kenya ugu soo fududaato xiligaa ma jirin.
Hadda Kenya sidi ay rabto aya loo yeela, Ganacsi ay bur-buriso lagama hadlo, Hawo ay ku xad gudubtay lagama jawaabo, shacab ay duqeyn ku dishay lagama fal celiyo. Maalin kasta waa taa fariimo hanjabaad ah hawada so marisa. Hadda bacdama waqtigii dooda badda la sii kordhiyay waxa ay sii wadan doonta gardarradeeda joogtada ah.
Arintan badda iyo baacsiga joogtada ah ee Kenya waddo “Waa qeyb ka mid qabayadii uu ka tegay Xasan Sheikh 2017, oo sida ay Aniga ila tahay uu saacadahan ka dhamaan lahaa.
Talada qoraaga: Si badda loo soo celiyo arintan Xasan Sheikh halaga talo geliyo.
Waxaa qoray: Jacfar Maxamed.
Xabbad wiifto ah aya ku dhacday oo wali Madaxa uga jirta. Faldan Caawi.
Khadiijo Macalin C/laahi Waa Gabar yar oo la daalaa-dheceysa xanuun Madaxa ah ka dib markii “Xabad Wiifto ah ay kaga dhacday Madaxa, dhowr Habeen ka hor xili ay ku sugneed afafka hore oo Hoygooda kuna yaala Degmada Wadajir Ee Gobolkan Banaadir .
Khadiija waxa la geeyey dhowr isbitaal oo ku yaala “Magalada Muqdisho ee caasimadda dalka, si looga soo saaro Xabada oo Fariisatay Meel aan sidaa ugu fogeyn maskaxda .
Dhamaan isbitaaladii la geeyey khadiija waxa ay ku wargiliyeen ehladeeda in aan dalka gudihiisa waxbo looga qaban karin, Maadaama xabada ay ku jirto meel halis ah oo aysan awoodin in ay kasoo saaraan .
Allah ha Caafiye khadiijo hada waxa ay ku jirtaaa xaalad miir daboolan, waxaana la dhigay isbitaalka digfeer iyadoo aan laheen Wax ogaal ah .
Dhibane Khadiija Macalin C/laahi hada waxa ay u baahan tahay Madaxda dalka iyo cid walbo oo awooda in ay gacan ka geysato in loo qaado dibada si loo badbaadiyo Nolosheeda oo ku jirta Xaalad Cakiran.
Qoyska Khadiijo Waxaad kala xariiri kartaa “0618684727 ama 0618684728
Xaqiiqdii waa talaabo bogaadin mudan, iyo Wax qabad Muuqda oo Dowladdu sameysay.
November 5, 2019 November 5, 2019 Jacfar Maxamed
Muddo 28 sano ka dib Dowladda
Nabad iyo Nolol oo ah dowlad ku timed rabitaanka shacabka ayaa ku guuleysatay in ay gebi ahaan joojiso musuq-maasuqa iyo ka warqab la’anta Guurka Madaxda Dalka, oo dowladihii tan ka horeeyay ay wax ka qaban wayeen, waxana soo badanaya Siyaasiyinta arooskoda la maqlo, lagana qeyb galo.
Labadii sano ee dambe Isla Mariana ay talada dalka haysay Xukuumadda Nabad iyo Nolol waxaa la arkayay siyaasiyiin, Madax xilal kala duwan haya oo sheeganaya guurkooda loona Hambalyeynaayo.
Intii Dowladdan ay jirtay waxaan aragnay oo qaarkood nagula casuumay “Guurka guddoomiye kuxigeenka Baarlamanka Mr Muudey, Duqii hore Magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, Wasiir ku xigeenka wasaaradda Warfaafinta Adam Isaq, Wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo Khadiijo Maxamed Diriye oo aroos qaran loo dhigay, Wasirka Qorsheynta Soomaliya “Wasiir Jamaal Maxamed Xasan. Wasiirkii warfaafinta Dahir Maxamuud Geelle, Xildhibaan Mahad Salad, Xildhibaan Samiiro, Guddomiyaha Golaha shacabka, Guddomiye ku xigeenka Amniga iyo siyaasadda Gobalka Banaadir Mr Tuulax iyo Ra’isul wisaare ku xigenka Dalka Mahdi Maxamed Guuled (Khadar) oo ugu dambeeyay aroosyada qaran ee dhacay, kaa oo aan loo kala harin, waliba la shegay in Kulan ay yeelan lahayen Golaha Wasiirada loo baajiyay Arooska
si kastaba(Hambalyo Mudane).
Runtii waa tallaabo wayn oo ay qaaday Xukuumadda Nabad iyo Nolol, waxana arintaa ku tilmaami karnaa “Guulo waaweyn ee la gaadhy dhowr sano ka dib, sido kale waa shaqo ay Dowladihii tan ka horeeyay ay ku fashilmeen.
Wax-qabad muuqda. Aroos qaran oo aan Hilmaamay miyaa jira? Soo sheega.
Waa Kuma Qofka Ka Hodansan Bill Gates?
November 4, 2019 November 4, 2019 Jacfar Maxamed
Bill Gates ayaa la waydiiyay ma jiraa qof kaa hodansan ? Wuxuu yiri “Hal qof ayaa jiro oo iga hodansan. Waala waydiiyaay yaa waaye qofkaa? Wuxuu ku jawaabay markaan jaamacada ku jiray waxaa igu soo dhacday inaan bilaabo mashruuci Microsoft, maalin anigoo safar ah oo kasii baxayo Airpoorka New york ayaa waxaan arkay wargeys meesha yaalo waxaan damcay inaan gato laakin waxaan waayay lacag yar ama jajab, kadibna waan iska dhaqaaqay waxaan arkay wiil madow ah oo iga soo daba ordayo i leh hoo qaado, waxaan ku iri lacag ma haystee maxaan sameeyaa,wiilkii wuxuu igu yiri waa hadiyad xageyga kaaga timid ee qaado waan soo qaatay! Hadana 3bil kadib anigoo raba inaan safro ayaan meeshii soo maray waxaana arkay wargeys meesha yaallo waxaan damcay inaan gato hadana waxaan iska waayay lacag yar, waan isaga soo tagay,mar kale wiilkii madowga ahaa ayaa iga soo daba cararay wuxuuna igu yiri hoo qaado joornaalkan,waxaan ku iri hada ka hor meshaan ayaan soo maray lacagna ma haysan wargeyskii lacag la’aan ayaad igu siisay maantana sidoo kale arintaan ma qof walbaa u sameysaaa,wiilkii wuxuu yiri maya qof walbo uma sameeyo ee hadan goaansado inaan wax bixiyo waxaan ka bixiyaa lacagtayda gaarka Bill Gates wuxuu yiri hadalkiiisa raad ayuu igu reebay aadna waan uga fikiray,19sano kadib markaan lacag fara badan helay waxaan goaasnaday inaan raadiyo wiilkaas madowga ah, koox ayaa sameeyay waxaaana usheegay inay ka raadiyaan meel walbo, baaritaan dheer oo bil iyo bar qaatay waala soo helay asagoo meel Masrax ah waardiye ka ah ,waxaan ku iri ma i taqanaa? Wuxuu yiri haa, ma jiraa qof aanan ku aqoonin waxaad tahay maal qabeenka La yiraahdo Bill Gates Waxaan ku iri adigoo yar ayaad labo mar hadiyada ahaan ii siisay wargeys anigoon wadan lacag yar maxaad sidaa u sameysay? Wiilkii wuxuu yiri arintaas waa wax caadi ah waana dareenkayga! Bill Gates wuxuu ku yiri hada waxaan rabaa wanaagii aad ii sameysay inaan kuu sameeyo? Wiilkii wuxu yiri sidee? Bill Gates wuxu yiri wax walbo ayaan ku siinayaa oo aad rabtid? Wiilkii wuxuu yiri ma wax walbo aan dalbado ayaad isiinaysaa? Bill Gates wuxuu yiri haa sababtoo dowlado badan oo Afrikaan ayaan amaah siiyay waana kusiinayaa inta aan siiyay oo kale ! Wiilkii wuxuu yiri abaalkii aan kuu sameeyay iima gudi kartid ! Bill gates wuxuu yiri ima gudi kartid maxaa ka wadaa ? Wiilkii wuxuu yiri waad awoodaa lacag inaad isiisid laakin abaalkii iima gudi kartid sababtana waxay tahay anigoo faqiir ah ayaan ku siiyay waxaan u baahnaa adna waxaad rabtaa adigoo lacag badan haysta inaad isiisid lacag, waxa aan u baahanahay waa naxaristaada ee lacag ma rabo! Bill Gates wuxuu yiri mar walbo waxaan dareemaa wiilkaas inuu iga hodansanyahay. Adigoo wax ubaahan inaad bixisid ayaa ka wanaagsan adigoo lacag haysta inaad bixisid. Shekadaan marar badan ayan hore u akhriyay ayado luqado kala duwan ku qoran.
W.T: Jacfar Maxamed